Naya Bikalpa | वैरगनिया सम्मेलन र २००७ सालको क्रान्ति - Naya Bikalpa वैरगनिया सम्मेलन र २००७ सालको क्रान्ति - Naya Bikalpa
वैरगनिया सम्मेलन र २००७ सालको क्रान्ति
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष १७, ०९: ५२: २७
२००६ चैत्रमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस एकीकरण भएर “नेपाली काङ्ग्रेस” बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गठन हुनासाथ नेपालको राजतन्त्र समाप्त पारेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अहिसांत्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सम्भव नहुने भन्ने निर्णयमा पुगे– नेताहरु ।
भारतीय भूमिबाट क्रान्ति गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बुझेर बी.पी.ले पाल्पा क्षेत्रलाई क्रान्तिको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले त्यतातिरको अवस्था बुझ्न गए । तीन दिन गोप्य बसाइपछि यो कुरा सम्भव नहुने बुझेर बी.पी. गारेखपुरतिर लागे ।
२००६ चैत २७ मा दुई पार्टी एकीकरण भएपछि बी.पी. र सुवर्ण समसेरले सशस्त्र क्रान्तिको तयारीका लागि भारतीय वृटिश सेना र आजाद हिन्द फौजका अवकाश प्राप्त नेपाली सैनिकहरुलाई सङ्गठित पार्न थालेका थिए ।
यसैबीच २००७ असोज १०–११ गते विहारको वरगनिया गौरको सीमा पारी नेपाली कांङ्ग्रेसको सम्मेलन भयो ।
“राणा शासनलाई समाप्त पारी प्रजातन्त्रीय जनउत्तरदायी शासन खडा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांङ्ग्रेसले यो सम्मेलन गरेको हो । सबै कार्यकर्ता एकजुट भई जनक्रान्ति सफल पारुन् ।”
यस्तो उद्घोषसहित नेपाली कांङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालीन “शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नीति” परित्याग ग¥यो । बी.पी. कोइरालाले आफै बर्मा पुगेर हात हतियारको बन्दोवस्त गरे । महावीर समसेरको हिमालय एविएसनको विमानबाट हातहतियार ल्याए । भारतको पटना नजिकै बक्सर भन्ने ठाउँमा विमान उतारियो । त्यसपछि विमानमा रहेका ती हातहतियार नेपालका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पु¥याइयो ।
राजा त्रिभूवन भारततर्फ
वि.सं १९९७ को प्रजापरिषद् काण्डदेखि नै राजा त्रिभुवन राणाविरुद्ध हुँदै गएका थिए । नेपाली कांग्रेस स्थापनापछि गोप्य रुपमा राजासँग भेटघाट र क्रान्तिको तयारी बारे जानकारी प्राप्त गर्दै थिए । यसैबीच २००७ कार्तिक २१ गते बिहानै राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र लगायत सम्पूर्ण राजपरिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । दिल्लीको विशेष सक्रियतामा कार्तिक २६ गते राजा त्रिभुवन लगायत सम्पूर्ण राजपरिवार भारतीय विशेष वायुयानद्धारा दिल्ली प्रस्थान गरे ।
२००७ कार्तिक २५ गते मध्यरातमा वीरगञ्जबाट क्रान्ति सुरु भयो । मुक्ति सेनाका सैनिक कमाण्डर थीरमब मल्लको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो । भोलिपल्ट २६ गते बिहानसम्म वीरगञ्जमा नेपाली कांङ्ग्रेसको चारतारे झण्डा फपहराइसकेको थियो ।
यसैबीच विजय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कमाण्डर थीरबममाथि गोली प्रहार भयो । परिणामस्वरुप थीरबम मल्ल यस क्रान्तिका पहिलो शहीद भए ।
यस घटनाबाट उग्र बनेका मुक्ति सेनाले त्यस दिन भरिमै सम्पूर्ण बीरगञ्ज कब्जा गरे । विमानबाट देशभरी क्रान्तिसम्बन्धी पर्चा पम्प्लेट छर्ने काम भइरह्यो । कार्तिक २६ को मध्यरातदेखि विराटनगरमा पनि क्रान्ति सुरु भएर उता पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा समेत फैलियो । सशस्त्र क्रान्ति व्यापक बन्दै गयो ।
तारिणीप्रसाद कोइराला र फणीन्द्रनाथ रेणुको प्रयासमा विराटनगरबाट नेपाल रेडियो स्थापना र प्रसारण सुरु भयो । रेडियोबाट समाचार प्रसारण हुन थालेपछि क्रान्तिको सफलतामा ठूलो योगदान पुग्न थाल्यो ।
रेडियो प्रसारणले क्रान्तिकारी योद्धाहरुमा ठूलो जोस जागर फैलायो । उत्साह र प्ररणा बढायो । वास्तवमा आधा युद्धको विजय त रेडियोको प्रचार –प्रसारले नै गराएको थियो ।
विराटनगरको क्रान्तिमा डा. कुलदीप झा. लगायत दर्जनौं योद्धा शहीद भएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित डेढ महिनाभन्दा बढीको सशस्त्र युद्धपछि विराटनगर र वरपर क्रान्तिकारीको कब्जामा आयो ।
उदयपुर गढी जनकपुर क्षेत्रमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र रुद्रप्रसाद गिरीको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति गरेर कब्जा गरियो ।
यसरी नै सर्लाही मलंगवा, भोजपुर, चैनपुर, तेह्रथुम, ओखलढुंङ्गा, रामेछाप, चरीकोट, सिन्धुली आदि स्थान २००७ माघ १५ भित्र क्रान्तिकारीको कब्जामा आइसकेका थिए ।
पूर्वतर्फका झापा, इलाम, भद्रपुर, धनकुटा ताप्लेजुङ्ग क्षेत्रहरुमा पनि मुक्तिसेनाका नियन्त्रणमा आए । पश्चिमका भैरहवा, परासी, तौलिहवा, कोइलावास, दाङ प्युठान, सल्यान, पाल्पा, स्याङ्जा बाग्लुङ, पर्वत, पोखरा, तनहुँ, बन्दीपुर गोरखा आदि क्षेत्रमा मुक्तिसेनाको आधिपत्य भयो । कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, सुर्खेत, दैलेख नेपालगञ्ज लगायतका प्रायः सबै क्षेत्र मुक्तिसेनाले जितेको थियो ।
राजधानी काठमाडौंमा राजा र राजपरिवार भारततर्फ गएकै दिन २००७ कार्तिक २६ बाट आन्दोलन सुरु भयो । राणा मोहन समसेरले तीनवर्षे ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएको विरोधमा काठमाडौंका बासिन्दा झन् झन् विरोधमा उत्रिएका थिए ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको जुलुस प्रर्दशनका क्रममा न्हुछेरत्न मानन्धर र भोगेन्द्र मानसिंह लगायतले शहादत प्राप्त गरे । आन्दोलन चर्किएपछि काठमाडौंमा संकटकाल घोषणा गरेर सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
यसैबीच मोहन समसेरले राजा त्रिभुवनलाई फर्काउन र संविधानमा आवश्यक सुधार गर्नेबारे वक्तव्य प्रकाशित गरे । क्रान्ति चलिरहेकै बेला कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री, राजा त्रिभुवन र मोहन समसेर, बी.पी मातृका लगायतका बीच वार्ता चल्न थालेको थियो । यसैबीच २००७ माघ ३ गते तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस अध्यक्ष एवं क्रान्ति कमाण्डर मातृका प्रसाद कोइरालाले युद्धविरामको घोषणा गरे । पटनामा सम्मेलन गरेर नेताहरुले प्रजातन्त्र स्थापना संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था सम्बन्ध आवश्यक छलफल गरे ।
यद्यपि युद्धविरामको घोषणापछि धेरै नेता एवं कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । पश्चिमतर्फका युद्ध कमाण्डर डा. के आई सिंह लगायत अन्य केही क्रान्तिकारीहरुले युद्धविरामको अवज्ञा गरेका थिए । दिल्लीमा राजा, राणा र न्पाली कांङ्गे्रसकाबीच भएको वार्ता, सहमती र समझदारी अनुसार फागुन ४ गते राजा र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरु काठमाडौं आइपुगे ।
यसै अनुरुप प्रजातान्त्रिक नेपाल प्रारम्भ भयो । यथार्थमा के हो भने काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पूर्व–पश्चिम, तराई–पहाड सबै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका मुक्तिसेनाले विजय गरिसकेका थिए । काठमाडौं वरपर पनि आन्दोलन चरम चुलीमा पुगेको बेला दिल्ली वार्ताद्वारा राजा, राणा एवं नेपाली कांग्रेसबीच सम्झौता हुन पुग्यो । सोही सम्झौताको परिणती २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनको घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । (डा. तुलसी भट्टराईद्वारा लिति बी.पी. कोइराला र नेपाली कांग्रेसबाट )
२०७४ पुष १७, ०९: ५२: २७